CrazyCall 1.2 - Izicelo - Cydia [Simahla] - Guqula i-ID okanye ithowuni yelizwi kwifowuni | IPhone iindaba
I-CrazyCall, sisicelo sokudlala ukudlala kwiitshomi zakho.
Uya kuba nakho ukutshintsha i-ID yakho yomntu ofowunayo, ke xa ufowunela umntu, lo mntu uya kubona umnxeba ongenayo kunye ne-ID oyikhethileyo.
Unokutshintsha ithoni yelizwi lakho, uyenze iphantsi kwaye inyibilike okanye iphezulu kwaye ihlekise.
Ukuze uyifake, kuya kufuneka uyenze isebenze iJailbreak.
1- Khetha ukuba yeyiphi i-ID yomfowunelwa ofuna ukuvela kwiscreen kwaye ufake inombolo ofuna ukuyitsalela umnxeba.
2- Cinezela "undifunele ikhowudi" kwaye baya kukubonelela ngenombolo oza kwenza ngayo umnxeba, kunye nekhowudi.
3 - Tsalela inombolo
4 - Ngenisa ikhowudi kwaye baya kuqhagamshela umnxeba kumhlobo wakho nge-ID yomntu otsala umnxeba kunye nelizwi olikhethileyo.
Ukuze isicelo sisebenze, ifowuni iya kusebenzisa ukufowunelwa kwamanye amazwe okanye inombolo eyongezelelweyo yenani ngokuxhomekeke kwiinkampani ezahlukeneyo.
I-CrazyCall Sisicelo sasimahla esinokukhutshelwa kudidi lwe «Izixhobo»en Cydia ngokugcina Ubhosi omkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » Cydia » CrazyCall 1.2 - Izicelo - Cydia [Simahla] - Guqula i-ID okanye ithoni yelizwi kwifowuni
kakuhle kakhulu! Ukutsalela umnxeba kwi-806 yokukuhlawulisa ngaphezulu kwe-1 euro ngomzuzu ... uyahlekisa xa usazi ukuba ukhuphele into yokuphinda uyivuselele umbulelo kuThixo okwazileyo ukugcina iveki yonke. Yeyiphi inkqubo ehlekisayo e? Umama wam, andazi ukuba bakhona njani abantu abanokukopela ngolu hlobo.
Yonke imihla bayayijonga le incinci ... kwaye okokugqibela ndiyifaka apha into, kwabizwa i-iPhone, ngoku babiza i-806 ... yomelele kangakanani ....
Kule nkqubo ithi ixabiso layo lahlukile
Luxanduva lwakho, andazi ukuba ukhalaza ngantoni
Ndiyavumelana nabanye. Ibingathatheli ingqalelo into yokwazisa iinkqubo ezinje. Ndisandula ukuqhekeza i-euro kunye nomzuzu.
Le forum iqalisa ukutshona kakhulu. Ndiyathemba ukuba banononophelo ngakumbi malunga nezinto abazithumela kwixesha elizayo, ngaphandle kokuba bafumane ikhomishini yazo zonke i-euro esishiye apho. Siza kubona ukuba abawaqwalaseli la magqabaza ...
Kubonakala kulungile kakhulu kum ukuba upapasha zonke iintlobo zezicelo, kodwa into yokuqala ekufuneka uyibekile yile bayabiza ngayo ezi ntlobo zeenkonzo. Ndicinga ukuba ukuba awuyifaki, ibiya kuba khange uyizame. Nceda uqaphele ngakumbi oku kuba baninzi abantu abanjengam abazama into oyibhengezayo, emva koko sifumane isimanga ...
Ndivumelana nabanye, mhlawumbi umntu oyipapasileyo akakhange ayizame okanye angazi ngayo, nangona kunjalo andifumananga le app kwi-cydia kwaye ndinayo i-repo, ndifumana i-app ebizwa ngokuba yi-CALL ID FAKE, kunye ne-The Inkcazo ithi usetyenziso lusebenza kuphela kwimizuzu emi-2 yomnxeba kodwa ungangena kwiphepha lakho kwaye uhlawule njengeprimiyamu ukuze umnxeba uhlale ixesha elide kunenye iya kuhlala i-2 min kuphela, andazi ukuba iya kufana okanye ukuba kukho umntu ozamile.
Into ekufuneka uyenzile endaweni yokukhalaza kwiforum kukufunda yonke iposti kakuhle, ithi ngokucacileyo:
Nabani na ofuna ukuyivavanya kufuneka ayifake kwaye nabani na ongayifakiyo, ongayifakiyo, apho nganye nganye.
Ewe kunjalo, ngoku kuyavela ukuba singabasebenzisi abafunda kakubi. Inqaku elibalulekileyo emazantsi wenqaku lifunda oku kulandelayo:
"Ukuze isicelo sisebenze, ifowuni iya kusebenzisa ukufowunelwa kwamanye amazwe okanye inombolo eyongezelelweyo yenani ngokuxhomekeke kwiinkampani ezahlukeneyo"
Kwaye ndithi, ayinguye wonke umntu ekufuneka aqonde ukuba "ifowuni izakusebenzisa umnxeba wokufowuna wamazwe aphesheya" kuthetha ntoni. Ifowuni "inokusebenzisa" nantoni na eyifunayo, kodwa kuya kuba lula ukuba ungazami ukukhohlisa abantu, utsho ngokucacileyo "uza kuhlawuliswa ngomnxeba wamanye amazwe." Ukuqhatha abakhwabanisi bahlala benesizathu.
Usisidenge umntwana, ke ngoko uthi kufuneka bakondle, kuya kufuneka ungabinamsebenzi wokungayazi loo nto kwaye uziqhayise ngokuba isiphoso sesabanye. ayihambi ngoluhlobo
Ndimema uBerllini ukuba achukumise amaqanda am, okanye abuyise oko andibize ngako. Njengoko beqhubeka ngoluhlobo, eli phepha liza kuphumelela isikhalazo ngolunye lwezi ntsuku ...
Ndenza kube lula kuwe, okanye ususe iposti kwifowuni ephambeneyo okanye ndifake isikhalazo kwi-OCU okanye naphina, kwaye ubone apho uyifumana khona imali yokuhlawula amagqwetha. Ngaphandle kokukhetha ukuya kwi-SGAE kwaye uxele ukuba eli phepha liququzelela ukuhanjiswa kwesoftware engekho mthethweni.
Ndiyathemba ukuba ucinga malunga nento oza kuyenza.
Faka igama lakho ... Pedrowallace sitsho
UBerllin uyaziphikisa, into ebaluleke kangaka njengamaxabiso exabiso, bekufanele ukuba uyibeke kwiphepha elingaphandle. Ukuba awukwenzi oko, inokuba zizizathu ezi-2;
- okanye awuzange uzame isicelo kwaye usike kwaye uncamathisele kwiwebhu
- Okanye ngaba sisicelo sakho kwaye awubhengezi kwiphepha elingaphandle ukuze iingono zindithande kwaye ufumane iinwele
Umalume uyavuma ukuba uyibekile prawn kancinci kwaye bekufanele ukuba uyipapashe ngenye indlela, kwaye ukuba uyayazi kufanele ukuba uxolise, ubuncinci ungayibeki into ebaluleke kangako kwikhava.
Phendula ukuze ufake igama lakho ... Pedrowallace
Kuqala ndikuxelele ukuba onke amanqaku ezicelo ezitsha okanye uhlaziyo aguqulelwe ndim kwaye awukopi kwaye uncamathisele kwenye iwebhusayithi.
Ngale nto ndihlala ndisiya kwimvelaphi yesicelo ngeModMyi okanye indawo yokugcina izinto zeBigBoss kwaye ukuba banewebhusayithi ndiye kwiwebhusayithi yabo
Ngapha koko, abo bakopa baninzi iiBlogs ezisemnatheni ezingayeki ukukopa amanqaku am ngokuzikopa ngokupheleleyo.
Ndihlala ndisebenzisa iskimu esinye, ukuze siluncedo ngakumbi kwabo bahlala belandela isoftware ye-iPhone eyona nto ndihlala ndibhala kuyo.
Xa ndithetha ngesicelo, into ebalulekileyo sisicelo kwaye ukuba ndenza ingxelo yesilumkiso, iya esiphelweni hayi ekuqaleni, kunye kwaye ndihlala ndiyibeka kwiRED, ukutsala umdla.
Kwaye ayisiyiyo le okanye nasiphi na isicelo esisesam.
I-iPhone indibiza imali, ndigcina ii-iPhones ezi-3 (2G, 3G kunye nee-3Gs, endingazifuniyo) kuba ndiyayithanda kwaye kude kube ngoku ndikonwabele ukufundisa abanye ngayo yonke into ephumayo.
Kuphela ziifemu zam zesiko ezikhutshelwe kwiakhawunti yam yeMegaupload (endiyihlawulela yona ukuze uzikhuphele) kukho ii-iPhones ezingaphezulu kwe-100.000 ngeJailbreak ejikeleza umhlaba jikelele.
Ke sukungena kumcimbi weshishini kwicala lam.
Ubeke i-shrimp kwaye nguwe ongayiqondiyo.
Uninzi lwenu khange nisivule isithuba kwaye nihlala kwiqweqwe.
Icaciswe kakuhle kwaye yaqaqanjiswa ngombala obomvu "INQAKU ELIBALULEKILEYO".
-Ndiyibeka ngokuchanekileyo njengesilumkiso, ukuze abantu bazi ukuba baya kuhlawuliswa ireyithi yamanye amazwe okanye eyongezelelweyo kwaye yiyo loo nto ibomvu, ukuze ibonakale.
Uthinta amaqanda akho, njengoko ndibona ukuba ubamema ukuba bawachukumise, kufuneka uyithande
Jonga, uqinisekisile ukuba awukhathali ngabantu, ekufuneka ubhalele ukuba bafundwe. Phantse kuwo onke amanqaku (ngaphandle kwento endiyibonayo) yokwenyani, xa besazisa ngenkqubo okanye umdlalo, bahlala bebeka ixabiso kwikhava, ukuze bangangeni kwinqaku xa abantu bebona ixabiso bengenamdla. kwaye ungaqhubeki ufunda
Ndicinga ukuba bayakuhlawula ngento nganye, akunjalo? Kum eli li shishini, nokuba isicelo asisi sakho ...
berllin, enkosi ngayo yonke into oyenze kakuhle ... kodwa loo nto ayindithinteli ekujongeni njengeNtloko ye-MAXIMUM ukungayamkeli ukuba le ntengiso kufuneka ibe kwiphepha lokuqala ... kodwa ke, nantso ikratshi lakho. .. lumka, abo banayo inkulu kakhulu bahlala bephela betshona kuyo ...
Andiyiboni ingxaki, ulumkisile ukuba ndifakile kwaye ndenza uvavanyo oluthile ukuba ndichithe ulonwabo lwam ukuzama kwaye andikhalazi, kwaye ke ukuba isicelo esichaphazelekayo siyasebenza kuphela kwento ekufuneka uyibekile ekuqaleni: abantu Olimaze imali yabo kakhulu okanye uyadika okanye akoyiki ukuyikhuphela akukho bhetele ukubona le post, kwaye konke oko kulungisiwe kuba abantu banenkumbulo embi ukusukela xa ufundisa into eluncedo bavele bathi enkosi kwaye bajonge ukuba ndiyayidla enkosi kakhulu kakhulu, kodwa xa bengayithandi okwangoku bayacaphuka kwaye bayathukwa ukuba akukho mbulelo kweli hlabathi.
Lumka ngemilonetisi, ukuba unemali eninzi kakhulu, kwaye ngaphezulu kwako konke kula maxesha, kuba usibhatalela iifowuni kwaye yiyo loo nto. Ngaba awuboni ukuba le nkqubo yinkohliso? Kwisihloko sentengiso ithi SIMAHLA, kwaye ukuba emva koko bakubiza iifowuni ... = umkhonyovu
Hidan ... sitsho
Hahahaha kunjalo ndihlawula iifowuni zakho ngenxa yokuba ngumsebenzi wam ukuba ukwazi
thenga uhlawule oko ndikufunayo. Ingxaki ukuba kukho ingxaki kodwa ukuba awusebenzi iya isiba mandundu
Kwaye ukuba isicelo ukuba simahla kodwa ukhuphelo phinda ufunde iposti ukuba ucinga
Ndikhankanya isicelo sikwalumkisa umrhumo ocacileyo ukuba ubungasiqondi isithuba ngeSpanish ngaphandle kwesiNgesi, kwaye ungazulazeli kakhulu kwiphepha lombhali elithetha ngeenkcukacha ezithe kratya kwiphepha lakhe.
Ukufumana intlawulo yeminxeba yasimahla, nceda uzise iesile lakho licoceke kwaye i-enema iya kuqhelaniswa notshintsho lwayo ukusuka kwindidi ukuya kwimali.
Ndingayibeka ngesiNgesi ukuba uyafuna? kodwa ndicinga ukuba isiNgesi sakho asikho kangako
Phendula Hidan ...
Owu ndoda, nikela ngeBhaso likaNobel kulo mlinganiswa kuba uyasazi ISIXHOSA !!!! Machoteeee !!!! Kubonakala kum ukuba uphose isahluko seSesame Street apho bachaze khona ukuba SIMAHLA = ukungabhatali nesenti, okanye kwimeko yakho iziqholo kuba indlela obhala ngayo, uya kuhlala kakhulu kwilali ethile elahlekileyo ehlathini.
Ewe ndikuvumela ukuba ucinge ukuba kuya kufuneka uyokwenza isiko okanye umdaniso wemvula ...
Ndikuthumela ikhilogram yerayisi ukuze ungazingeli
Hahaha ndiyakuhleka ndoda ihluphekileyo izibonelelo ezilungileyo zokuhlala eCalfornia yiyo loo nto ndithetha isiNgesi esilumkileyo kukuba sithumela irayisi kuwe ukuze uyitye ungayidingi, ukuba iSpanish sam sibi kodwa ubuncinci mna uyiqonde ngcono kakhulu kunawe, ungathethi ngeentsinjana ezifana nezo uzibekayo, simahla ukuba ayibhatali kwaye awukhange ubhatale ukuyikhuphela njengakwezinye izicelo kuphela awuyifundanga indawo ngesiNgesi ekwakulumkisile ukuba Ndikuhlawulise ngonxibelelwano olucacisa gca ukuba linendlala.
Ukucinga ngayo ukuba undithumelele irayisi ukuze ndikwenzele i-paella xa sele uza kufa yindlala.
hahahahaha ayisenguye! hayi, eyam ibhetele! hahahaha kubonakala ngathi uneminyaka emi-5 ubudala ... upholile kangakanani ukuhlala eCalifornia, ke xa u-andres pete engaphumeleli, uya kuhamba .... emazantsi olwandle Matile Rile Rile, ukuya emazantsi oLwandle iMarile Rileron, CHIM POM !!!
Hahahaha, ukuba neminyaka emi-3 ubudala, ndicinga ukuba ndinobukrelekrele kunawe kwaye andizukubhengeza kwizithuko njengokuphela kokhuseleko, hahahaha, ndicela ungayeki ukundibhalela, uyandihlekisa kwaye undonwabisa kakhulu !!
Unyanisile, ndichithe ixesha elininzi kunye nawe, ntombazana encinci enobuchule, sele ndibhatele iifowuni zakho ndikunika i-enema yakho, emva koko ndiya kwilali yakho (kwiesile).
Puto ukuba uyandiphendula.
Ndoda, nzulu, shiya iesile lam lodwa, ukuba akukho nto uyenzayo ngaphandle kokuthetha malunga ne-enemas kwaye ukuba nge-esile, ngeli nqanaba ndiza kucinga ukuba ndiyakujija
Kulungile yiza ndikuphulula kancinci ukuze wehlise umoya kwaye ulale kakuhle, kulungile?
Ndiza kubona ngomso! 😉
Hahaha ngoku uba undihlekisile ndaze ndehla indlela enomsindo ngayo le nto yokugqibela, kwaye andiyazi ipholile. Kodwa andinokwazi ukuhamba ungakhange undiphathe (incanca yam) hahaha ndithini.
molar = uthanda
Ndiyabona ukuba umqulu kamalume-malume uhamba kakhulu, ndiyaxolisa kodwa incanca yam ichukunyiswa kuphela ngoomakazi, into endiyibonayo awuyazi nokuba iyintoni.
Ewe nditshilo, singayenza le nto ingunaphakade, ngokwakho 😉
Ndidikiwe yile ndoda, ndiphume apha kwaye ukuba ndiyazi ngoomakazi apha zininzi izinto ezimangalisayo zokubona oonodoli, yiyo loo nto kungekho mntu undikhuphileyo apha uyawuhlamba.
Indoda yakwaHidan ibilulonwabo lokwenene, ndiyathemba ukuba khange ucaphuke kakhulu, inyani kukuba bendidlala. Uxolo xa ndikonile, ndiyathemba uyonwabele iphone yakho, eyona nto ibaluleke kakhulu, ngaphandle kwe iphone ndilinde ipad, namhlanje kuzofuneka ndifike, ndizobona ukuba injani.
Abo kuni baqhankqalazayo liqela labantu abangaqhelekanga nabangenalwazi.
Kwiinyanga ezimbini uzakube ukhangela indlela yokukhupha okanye yokwenza njani andazi ukuba leliphi ibali kunye nephepha lale webhusayithi liza kuvela nenkcazo kwaye ngokuqinisekileyo apho asizukuzibona izimvo zakho zokubulela kwaye kuncinci umntu obuza iakhawunti inombolo ukwenza umnikelo umzekelo. Kodwa jonga indlela abanye abaqheleke ngayo abathi bayayibuyisa imali echithwe UKUNGAFUNDI.
UGentuza. Xa ndifunda izinto ezinje, ndiyazibuza ukuba kutheni abantu beqhubeka nokufaka izinto endaweni yokuba bazigcinele zona kwaye bandenze ndazixabisa ngakumbi.
Berllin, Siyavuyisana nomsebenzi wakho kwaye ndiyabulela!
okungaqhelekanga yimbovane yakho, kodwa ayiqhelekanga, ayiqhelekanga. Ndicinga ukuba akukho mfuneko yokufaka ibali xa lifaka isiciko, nakwisihloko esithi, "SIMAHLA". Ndikwacinga ukuba AMANQAKU ABALULEKILEYO kufuneka aye kwisiciko, kuba ngokwento ayithethileyo ibalulekile, akunjalo?
Kwaye uyazi ukuba asiyicelanga eyokubuyiselwa imali, sikhalaze kuphela malunga nolwazi olungelulo olukwiphepha.
Ngoku ungatya iesile likaBerllin
Ndisifundile isilumkiso kwaye kungoko ndaye ndagqiba kwelokuba ndingasikhuphi isicelo, kufuneka ndifunde lonke ulwazi, ke musa ukubeka ityala kwiforum, kuba ukuba iyalumkisa ngentlawulo ukusukela, njengoko isitsho, inkqubo iyenza UBIZO LWAMAZWE NGAMAZWE…. Iqondakala ngokuchanekileyo? okanye uyayifuna incwadana yabakhubazeke ngengqondo ukuze uyiqonde loo nto ??? Kuyo nayiphi na ilizwe, umnxeba wamazwe aphesheya UXAXA NGAKUMBI !!!
Kukwaqondwa ukuba le nkqubo YIMAHLA, andiqondi ukuntsokotha komcimbi uLeonidas, mhlawumbi inyanga nguwe… njengoko kucetyisiwe, kungcono ujonge kwaye ufunde kakuhle ...
Ndiyabulisa namhlanje iPhone !!! =)
Luis, macho, masibone ukuba uzifunda zonke iikhomenti kwaye ufumanisa kancinci ukuba kubonakala ngathi ufunda iikhomenti ezi-2 zokugqibela kwaye ucinga ukuba ungoyena ukrelekrele emhlabeni. Kwisimbozo kunye nesihloko sentengiso esithi ?? Simahla? Okanye ngaba ndiyayenza ... Ngaba awucingi ukuba bekufanele ukuba ndibeke umxholo wamaxabiso kwisiciko senqaku? Kukho abantu abangangeni kwindaba nganye, kwaye ukuba ikhava ithi isimahla, akulindelwanga ukuba wakuba nje ungena ezindabeni uyakufumana isimanga ... Yile nto bendikhalaza ngayo, kuba inqaku lilungile, kodwa kuluvo lwam aluchazwanga kakuhle, ngaba nguLuisito?
Iimpawu kunye nezinto ezichaziweyo ze-iPhone 4G evuzayo